Ny maso - tsy fitaratra fotsiny izany, fa ny ampahany mahafinaritra indrindra amin'ny tarehin'ny olona ihany koa. Amin'ny mason'ny maso maneho sy ny fijery malefaka ihany no ahazoanao ilay lehilahy nofinofinao. Ataovy mena ny masony ary manintona miaraka amin'ny pensilihazo manokana antsoina hoe "kayal."
Inona no atao hoe kayal?
Avy amin'ny pensilihazo hafa dia miavaka amin'ny tranokala sy ny firafitra ny tranokala. Mba hanaovana pensilihazo mainty, ampiasao ny holatra Holandey. Ity dia singa tena miorina amin'ny toerany sy mihinam-panafody. Tsy ampiasaina intsony ny grafy natao tamin'ny fanaovana karajia. Ny pensilihazo dia tokony hampiharina amin'ny endriky ny molekiolan'ny maso, ary ny sarin-javatra ho an'ireny tanjona ireny dia sarotra sy sarotra. Ny tranokala kosmetika kalitika kalitika dia vita amin'ny plastika na vatan'ny vy, satria mety hiditra ao amin'ny mucosa ny chips ary hanapaka izany amin'ny fisarihana ny pensilihazo. Ireo vehivavy voalohany nahita ity pensilihazo ity dia vehivavy Indianina. Ny dikanteny avy amin'ny iray amin'ireo fiteny natsangana tany Inde dia midika hoe ny anaran'ny pensil iray dia midika hoe "fifandonana amin'ny maso".
Ahoana ny fampiasana kayalom?
Ankehitriny io pensilihazo io dia azo vidiana amin'ny loko rehetra. Ao anatin'ireo orinasa marobe mpanao hatsikana dia misy palettes feno. Raha mampiasa pensilihazo ianao dia afaka mamorona sary miavaka.
Saingy mila mahatsiaro fitsipika iray ianao: ny lokon'ny mainty hoditra dia hampiharihary ny maso kely. Ny fametahana pensilihazo dia tokony hiorina amin'ny toe-javatra marobe: ny fifehezana ny maso, ny endriky ny tarehy sy ny loko. Ankoatr'izany, raha ny fotsy hoditra dia rakotra vina mena amin'ny torimaso ratsy na miasa ao ambadiky ny monitor iray, ny trano mainty mainty dia hanamafy izany.
Azonao atao ny mampitombo ny masonao miaraka amin'ny jiro kely. Ataovy manodidina ny mason-koditra amin'ny pensilihazo ary ampisehoy ny volonao maitso matevina, azonao ampiasaina ny manga manga. Azonao atao ny mampiasa jiro misy alokaloka, satria ny tsirairay amin'izy ireo dia manokatra "maso" ny maso.
Sarimihetsika miloko fanadiovana ny pores
Fitaovam-pitokisana eo amin'ny mofomamy
Make up for the wedding with your own hands
Ahoana ny fomba fambolena marevaka tsara ao anaty aloka?
Tontolon'ny Repoblika Tseky
Oscurso Oscar: Mpilalao sarimihetsika 10 izay nisaraka taorian'ny nahazoany ny loka
MRI amin'ny anja
Chloe Kardashian dia tsy te-hiala an'i Tristan Thomson taorian'ny horohoro tamin'ny famadihany
Ohatra 30 avy amin'ny fanamafisana fa ho an'ny zanaka vavy, ny dadany dia namana tsara indrindra
Tadiavo ny tarehy any an-trano
Nahoana no miverina mainty ny voatabia?
Mandondom-biriky ny alimo amin'ny tarehy
Famantarana ny tsy fisian'ny vy ao amin'ny vatan'ny vehivavy
Adyghe sigara ao an-trano